“Bandhiga Buugaagta Muqdisho waxa uu ka dhiganyahay dib u curashada Soomaaliyada cusub” - BBC News Somali
“Bandhiga Buugaagta Muqdisho waxa uu ka dhiganyahay dib u curashada Soomaaliyada cusub”
Carwada Buugaagta Muqdisho waxaa maalgalisay hay'adda USAID
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay bandhiga buugaagta Muqdisho oo galay sanadkii sedexaad, waxaana kasoo qaybgalay wax ka badan kun qof oo u badan dhalinyarada jaamacadaha.
Bandhigga ayaa waxa uu soconayaa 13-ka, 14, illaa 15-ka bishan, waxaana buugaagtaadoo kusoo bandhiggaya, hadalana ka jeedinaya qorayaal caan ah oo Soomaaliyeed iyo kuwa cusub.
Qorayaasha sanadkan lagu casuumay waxaa ka mid ah Axmed Faarax Cali 'Idaajaa', Axmed Horari Bilal, Dr. Cabdiraxmaan Baadiyoow, Maxamed Cumar Cusmaan, Prof. Mustafa Feyruus, Dr. Maxamed Daahir Afrax iyo Dr. Xamdi Maxamed.
Fowsiyo Xaaji Aadan iyo Dr. Cabdiraxmaan Baadiyoow ayaa ka mid ah dadka buugaagtooda soo bandhigaya
Waxaase jira qorayaal cusub oo dhalinyaro ah oo markoodii ugu horaysay buugaag qoray, waxaa ka mid ah gabdho qoray buugaag cusub.
Dadka carwada wax kusoo bandhigaya waxaa ka mid ah wiil dhalinyaro ah oo dhigta dugsi sare oo ku yaala magaalada Burtinle, wiilkan oo ah farshaxaniiste oo lagu magacaabo Abshir ayaa waxa uu soo bandhigay sawirro uu ka sameeyay madaxda hadda iyo kuwii hore ee Soomaaliya iyo waliba qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha adduunka sida Kofi Annan, xoghayihii hore ee Qaramada Midoobay.
Nuur Cabdi Jimcaale oo ah dhiirogaliye nololeed oo aad u da'yar ayaa isaguna ka mid ah dadka kasoo muuqan doona masraxa bandhigga, wuxuuna bilihii lasoo dhaafay kasbaday quluubta dhalinyaro badan khudbadihiisa yoolka nolosha ku saabsan awgood.
Dad kun kor u dhaafaya oo dhalinyaro u badan ayaa kasoo qaygalay carwada oo socota sanadkii 3aad
Maxamed Diini oo ah agaasimaha shirkadda New Horizon oo ah tan sanad kasta soo qabanqaabisa ayaa sheegay in carwadan looga gol leeyahay dhismaha Soomaaliyada cusub, taas oo ah meel aqoonta iyo qoraalka aad looga tixgaliyo. Waxa uu sheegay in bandhigga uu soo nooleeyay rajadii dalka, kana dhiganyahay dib u curashada Soomaaliya.
Fowsiyo Xaaji Aadan, wasiirkii hore ee arrimaha dibada ee Soomaaliya, haddana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horeeyay ee maanta ka hadashay carwada, iyada oo soo bandhigtay buug ay ka qortay aabaheed oo ciwaankiisu yahay ' Geeddi-nololedkii Yusuf Xaji Aadam'.
Dhalinyaro markii ugu horaysay buugaag qortay ayaa ka mid ah dadka wax soo bandhigaya
Waxaa jira dad kala duwan oo hadalo ka jeedinaya carwada, waxaana ka mid ah dad xeeldheerayaal ku ah shaqooyinka ay bulshada u qabtaan, soona jeedinay waayo-aragnimadooda.
Dadkii maanta bandhigga booqday waxaa ka mid ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Maxamed Cusmaan iyo wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Micheal Keating.
Bandhigyada buugaagta ayaa kusoo badanaya Soomaaliya, bishii lasoo dhaafay waxaa kan oo kale lagu qabtay magaalada Hargaysa kaas oo muddo dheer soo socday, sidoo kale sanadkan horaantiisii waxaa bandhigyadan oo kale lagu kala qabtay magaalooyinka Garoowe iyo Kismaayo.
Afar sababood oo Soomaaliya ay markii horeba xiriirka ugu jartay Kenya
"Kama welwelsani nolosha caruurtayda, Alle ayaa go'aaminaya sida ay ku noolaan doonaan"